Vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: « Hofaizina ireo manao herisetra amin’ny vehivavy…” | NewsMada
Vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: « Hofaizina ireo manao herisetra amin’ny vehivavy…”
Par Taratra sur 26/04/2019
Tsy ambanambana intsony fa tena vaky ny ady amin’ny herisetra eto amintsika. Nanomboka, omaly teny amin’ny CCI Ivato, fanentanana ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy na maha vavy na ny mira lenta. Nitarika izany ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy.
Nambarany tamin’ny lahateniny fa ilaina ny fiaraha-miasan’ny rehetra manoloana ity ady ity. “Nihaona tamin’ny minisitry ny Fitsarana sy ny Mponina izahay ny amin’ny fahafaha- mametraka rafitra hisorohana ny herisetra sy ny hanafaizana ireo tompon‘antoka ary ny handraisana an-tanana ireo iharan’izany”, hoy izy. Nanteriny fa ilana fahavononana ny hampitsaharana ny herisetra. Fanombohana ihany anefa izao fanentanana izao, araka ny nambarany. “Mbola lavitra ny lalana hodiavina ary tsy vitan’ny resaka am-bava fotsiny fa mila fandraisana andraikitra izany ady amin’ny herisetra amin’ny vehivavy sy ny ankizy izany” hoy ihany izy. Natsidiny tamin’izany fa hatao laharam-pahamehana ny famolavolana lalàna hiadiana amin’ny herisetra sy ho fiarovana ny zon’olombelona.
Notsiahiviny fa maro ireo efa nitondra takaitra noho ny herisetra. Niaina tantara mampalahelo sy manohina fo, nandalo lalam-piainana sarotra, nanaiky hizara izany. Niharan’ny herisetra amin’ny vatana ary nitondra takaitra. Teo koa anefa ireo lehilahy, ny ankizivavy niharan’ny fanolanana. “Niraisan’izy ireo ny fahavononana hivoatra. Mendrika hoderaina ny fahasahin’izy ireo.. . Matoky fa ny mpanabe na ny Andrimpanjakana sy ny fanjakana samy afaka mitondra anjara biriky hiady amin’ny herisetra. Ireo zatra ny lalan-diso kosa, fotoana izao hanovana famindra… Helohin’ny lalàna ny herisetra”, hoy ny filohan’ny Fitia.
Tsiahivina fa mpiara-miombona antoka amin’izao famakiana ady amin’ny herisetra izao ny rantsan’ny firenena mikambana UNFPA sy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina ary ny avy amin’ny Fitsarana.